IVidiyo: Iphoyinti elibi | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 23, 2007 Douglas Karr
Ingcebiso yomnqwazi ku Ukuthengisa kunye neTekhnoloji
NgoJulayi 23, 2007 ngo-5:03 PM
Jul 24, 2007 ngo-5: 26 AM
NgoJulayi 24, 2007 ngo-12:32 PM
Kuyoyikeka, mangaphi amanqaku asemthethweni akhoyo. Kudala ndanceda abanye abantu baseofisini ukuba baphucule indlela abathetha ngayo. Iyamangalisa ukuba bangaphi abacinga ukuba igama ngalinye elithethiweyo kufanele libe kwiscreen?
Kuphela ziigrafu ezineenkcukacha ezininzi eziziigrafu ezilungileyo?
Ngaba umntu kufuneka ahlale ebonisa ukuba zingaphi iifom zochwethezo ezikhoyo ekhompyutheni?
Imibala kufuneka isetyenziswe kakhulu?
Iimvelaphi kufuneka ziphazamise kangangoko kunokwenzeka?